Highlights from Sexual Harassment show - DVB Multimedia Group
Highlights from Sexual Harassment show
by DVBDadmin · Published November 1, 2014 · Updated November 1, 2014
Highlights from DVB Debate’s Sexual Harassment show: “How can we stop harassment?”
“ကျမကတော့ အမျိုးသမီးတွေပဲ သီးသန့်နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခံနေရတယ် မထင်ဘူး။ မိန်းမသီးသန့်ကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေလိုတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ နိမ့်ကျနေလို့ ကာကွယ်ပေးရတယ်လို့ ခံစားရစေတယ်လေ. အားလုံးက လူတွေပဲလို့ အတူတူသတ်မှတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေချင်တယ်။”
ရွှေကူမေနှင်း – စာရေးဆရာ
“I don’t think only women are being harassed and I don’t think we needaprotection law only for women. If we do, then women will feel degraded and I wantasociety where men and women are equally treated.”
Shwe Ku May Hnin- Author
“ကျမတို့ကိုလေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဘောင်တွေခတ်ထားသလို ခံစားရတယ်။ ကျမတို့ ရင်ဖုံးဝတ်ထားလဲ မုဒိမ်းပြုကျင့်ခံရတာ ရှိမှာပဲ။ လိင်ကိစ္စဟာ သဘာဝပဲလို့ လူတိုင်းက သဘောမပေါက်သရွေ့ လိင်ကိစ္စကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကြီး တားမြစ်နေသရွေ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုတွေ ပိုဖြစ်လာနေမှာ။ လိင်အလုပ်သမလေးတွေကိုယ်တိုင်တောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားခံနေရချိန်မှာ ကာကွယ်ဖို့ ဥပဒေတွေ မလိုဘူးဆိုတာ ကျမ သဘောမတူပါဘူး။”
ယဉ်မျိုးစု – အင်းလေးအမွေအနှစ်ဟိုတယ်သင်တန်းကျောင်း ဥက္ကဋ္ဌ
“I feel like women are being blocked by an unseen barrier. Even if we dress properly, we risk being raped. Until people understand that sexual things are natural and people are allowed sex education, more and more sexual harassment will happen. I disagree that women don’t need specific protection laws as nowadays even sexual workers are being harassed.”
Yin Myo Su- Inle Heritage preservation school (President)
“မြန်မာစကားပုံတွေရှိတယ်လေ. ကြက်မ တွန်လို့မိုးမလင်းဘူး ဆိုတာ ဒါကိုက ကျားမ ခွဲခြားထားတာလေ။ ကြက်မ တွန်တွန် ကြက်ဖ တွန်တွန် မိုးကတော့ လင်းမှာပဲ။ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာပဲကြည့်..ပွဲတခုခုလုပ်ပြီဆို အမျိုးသမီးတွေမှာ ဘယ်လောက်ရာထူးကြီးကြီး ချက်ရေးပြုတ်ရေးနဲ့ဧည့်ခံရေးလုပ်ပါပေါ့ အမျိုးသားတွေကျ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ကြတာလေ။”
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ – မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ ဥပဒေအကြံပေး
“There isaBurmese proverb- the sound ofafemale cockerel can’t bring the sunrise. This is basically gender discrimination. Whether or notafemale chicken or male cockerel makes sounds, the sunrise will come. Look at government agencies, whenever they have ceremonies, women are expected to cook even if they are from high ranking positions, and men always take the role of organisers.”
Daw Myint Myint Wai- Legal Consultant for Mon Democratic Party
“အမျိုးသားတွေရှေ့ကနေ အမျိုးသမီးတယောက်လောက်ဖြတ်လျှောက်သွားလိုက် နောက်ကနေကြည့်ပြီး ဟာ လိပ်ခါးဖားဖင်ပါလား ဆိုပြီး ပြောဆိုကြတာရှိတယ်. ဒီလိုအပြောခံရတာကို ကျမတို့ အမျိူးသမီးတွေက တိုင်တန်းလို့ရတယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး.ဥပဒေအရ တရားစွဲလို့တောင် ရတယ်ဆိုတာလည်း မသိကြတာတွေရှိတယ်။ ဒီအတိုင်း ငြိမ်ခံနေကြရတယ်။”
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ – မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ ဥပဒေအကြံပေး
“Whenever women walk down the street, men objectify their bodies by saying, ‘hourglass figure’ and ‘nice body’. This is actuallyaform of sexual harassment but women don’t know that they can take action against these guys because they don’t have enough knowledge about the law. So they are living in silence without speaking out.”
“ကျမတို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားခံရမှုပြဿနာကို တဦးတယောက်ထဲတဖွဲ့ထဲ ခံစားချက်နဲ့ ကြည့်လို့မရဘူး။ ကျောင်းပညာရေး အနိမ့်ဆုံး အလယ်တန်းအဆင့်လောက်မှာ လိင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးစေချင်တယ်။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာနဲ့ ဗဟုသုတတွေ ထည့်သင်ကို သင်ရမယ်”
“We shouldn’t consider the issue of sexual harassment only from from an individual perspective. We should add sex education to the curriculum starting from middle school and should teach more understanding about sex.”
Daw Thi Thi Myint- NLD
Next story DVB Debate App
Previous story Next on DVB Debate:Sexual Harassment